I-Fibromyalgia: Ikuphi Ukudla Okufanele Futhi Ukudla Kwalabo Abene-Fibromyalgia?
25 / 07 / 2018 /Amazwana we-4/i Ubuhlungu obungapheli, izinga Izihloko/av olimalayo
I-Fibromyalgia: Ithini Ukudla Okufanele? | Iseluleko sokudla esisekelwa ebufakazini kanye nokudla kulabo abane-fibromyalgia
Ngabe uphethwe yi-fibromyalgia futhi uyazibuza ukuthi ikuphi ukudla okufanele kuwe? Izifundo zocwaningo zikhombisile ukuthi abantu abaningi abane-fibromyalgia bangaba nomthelela omuhle kakhulu wokudla ukudla okulungile futhi balandele lezi zeluleko zokudla esizinikeza lapha - ngakho-ke sethemba ukuthi nawe uzoba nomphumela omuhle kusuka "ekudleni kwe-fibromyalgia" esibhala ngakho kule ndatshana ngokususelwa ocwaningweni olukhulu lokubuka konke. I-athikili izokhuluma ngokudla okunempilo nokudla ngokuya ngokuthi hlobo luni lokudla okufanele uludle nokuthi hlobo luni lokudla okufanele ulugweme - imvamisa kuhlobene nokulwa nokuvuvukala kuqhathaniswa nokulwa nokuvuvukala.
[phusha h = »30 ″]
Umbiko Wocwaningo: Ukudla Okuhamba Phambili kwe-Fibromyalgia
Njengoba kwaziwa fibromyalgia ukuxilongwa kobuhlungu obungapheli obubangela ubuhlungu obukhulu emisipheni nasemathanjeni - kanye nokulala okungampofu kanye nokusebenza kwengqondo okungajwayelekile (ngokwesibonelo, inkumbulo inkungu yefibrous). Ngeshwa, alikho ikhambi, kepha ngokusebenzisa ucwaningo ungaba nokuhlakanipha ngalokho okunganciphisa ukuxilongwa kanye nezimpawu zako. Ukudla kudlala indima enkulu ekunqandeni ukusabela kokuvuvukala emzimbeni nasekunciphiseni ukuzwela kobuhlungu ezintanjeni zemisipha ebuhlungu. Lo mbhalo usekelwe ocwaningweni olukhulu lokubuyekeza olwenziwe nguHolton et al olunezifundo zocwaningo ezingama-29.
Abantu abaningi abane-fibromyalgia bayazi ukuthi kubaluleke kangakanani ukulalela umzimba ukugwema iziqongo zezinhlungu kanye nama- "flare ups" (iziqephu ezinezimpawu ezengeziwe). Ngakho-ke, abantu abaningi futhi bakhathazeke kakhulu ngokudla abakudlayo, ngenxa yokuthi bayazi ukuthi ukudla okufanele kunganciphisa ubuhlungu kwi-fibromyalgia - kepha futhi bayazi nokuthi uhlobo lokudla olungalungile lungaholela ekwandeni kobuhlungu nezimpawu ze-fibromyalgia. Ngamafuphi, ufuna ukugwema ukudla okunamafutha (okulwa nokuvuvukala) futhi kunalokho zama ukudla ukudla okulwa nokuvuvukala (okulwa nokuvuvukala). Ucwaningo lokubuka konke (ukuhlaziywa kwe-meta) olushicilelwe kumagazini owaziwayo wocwaningo Ukuphathwa kobuhlungu waphetha ngokuthi ukushiyeka emalungeni amaningi okudla kungadala ukuvela okuphezulu kwezimpawu nokuthi ukudla okufanele kungasiza ukunciphisa bobabili izimpawu nezimpawu. Bona isixhumanisi sesifundo esingezansi kwendatshana. (1)
Abantu abaningi banenkinga yobuhlungu obungapheli obulala impilo yansuku zonke - yingakho sikukhuthaza ukuba Yabelana ngale ndatshana kwabezindaba zenhlalo, Zizwe ukhululekile ukuthanda ikhasi lethu le-Facebook bese uthi: "Yebo ocwaningweni olwengeziwe nge-fibromyalgia". Ngale ndlela, umuntu angenza izimpawu ezihambisana nalokhu kuxilongwa zibonakale futhi aqinisekise ukuthi abantu abaningi bathathwa ngokungathi sína - ngaleyo ndlela bathole usizo abaludingayo. Siyethemba futhi ukuthi ukunakwa okunjalo kungaholela ekuxhasweni ngemali enkulu kocwaningo ngezindlela ezintsha zokuhlola nokwelashwa.
Funda futhi: - Kungenzeka ukuthi abacwaningi bathole imbangela 'ye-Fibro fog'!
Kholwa noma ungakukholwa: Ezinsukwini zakudala bekucatshangwa ukuthi i-fibromyalgia yisifo sengqondo
Eminyakeni eminingi edlule, odokotela babekholelwa ukuthi i-fibromyalgia yayigula ngengqondo. Kwakungaze kube ngu-1981 lapho isifundo sokuqala saqinisekisa izimpawu ze-fibromyalgia kwathi ngo-1991 i-America College of Rheumatology yabhala imihlahlandlela ukusiza ukubona i-fibromyalgia. Ucwaningo kanye nezifundo zemitholampilo zithuthuka njalo futhi manje sesingalapha i-fibromyalgia ngokwengxenye, kuhlangene nezinye izindlela zokwelapha, ngalokho esikubiza ngokuthi yi-fibromyalgia yokudla.
Manje sizobhekisisa ukuthi yini labo abane-fibromyalgia okufanele bakufake ekudleni kwabo - nokuthi hlobo luni lokudla okufanele bahlale kude nalo - kususelwa ocwaningweni olukhulu lukaHolton et al (2016). Siqala ngokudla okufanele umuntu akudle.
Funda futhi: - 7 Ukuzivocavoca Rheumatists
Ukudla okufanele ukudle uma une-fibromyalgia
Izithelo nemifino (kufaka phakathi i-low-footer and high-footer)
Izimo ezinjengokuncipha kwamatshe okungahambi kahle, ukukhuluphala nokuxilongwa kwe-autoimmune kuvamile phakathi kwalabo abatholwe ukuthi une-fibromyalgia.
Abanye babaphenyi abahamba phambili kulo mkhakha bayavuma ukuthi ukudla okunama-calories aphansi nokuqukethwe kwe-fiber ephezulu okuqukethe namazinga aphezulu ama-antioxidants kanye nama-phytochemicals (izakhi zomsoco ezinempilo). Sithola amanani abalulekile alokhu kwimifino nezithelo - futhi yingakho kunconywa ukuthi lokho kudla kwemvelo kufanele kube yingxenye ebalulekile yokudla kwalabo abane-fibromyalgia. Labo ababucayi ngokwengeziwe kufanele futhi bazame indlela ephansi ye-fodmap ukukhipha noma yimiphi imifino nezithelo abangenakubekezelela.
Izibonelo zemifino emihle yalabo abane-fibroyalgia ephansi yonyawo:
Yonke imifino kwifolda yonyawo oluphansi ibhekwa njengephephe kakhulu futhi ilungile kulabo abane-fibromyalgia ne-IBS.
Izibonelo zemifino engaba mihle nge-fibromyalgia (ifolda yonyawo oluphezulu):
Lezi yizibonelo zemifino ese-high-fodmap. Lokhu kusho ukuthi bangakunikeza okunomsoco omningi owusizo kuwe nge-fibromyalgia, kepha nokuthi ungasabela kweminye imifino ehlukile. Sincoma ukuthi usethe uhlelo futhi uzihlole - ngamunye ngamunye.
Izibonelo zezithelo ezinomsoco zalabo abane-fibroyalgia ephansi ngonyawo:
Kubalulekile ukuqaphela ukuthi labo abane-fibromyalgia babukeka sengathi babekezelela kangcono ubhanana ovuthiwe uma uqhathaniswa nobhanana obuluhlaza.
Izibonelo zezithelo ezinomsoco zalabo abane-fibromyalgia (ifolda yonyawo oluphezulu):
Izithelo ezomisiwe (ezinjengezomisiwe)
Uma kunezinto ezisohlwini lwe-FODMAP osabela kuzo futhi ezenza izimpawu zakho zibe zimbi kakhulu - khona-ke uyazi ukuthi ungahlala kude kuphi.
Izibonelo zamajikijolo aqukethe i-antioxidant zalabo abane-fibromyalgia:
Funda futhi: Lokhu Kufanele Ukwazi Nge-Fibromyalgia
Ukudla okucebile ku-omega-3
I-Omega-3 iyi-fatty acid ebalulekile. Lesi yisakhi esidingwa ngumzimba wakho, phakathi kwezinye izinto, ukulwa nokuvela kokuvuvukala, kodwa esingakwazi ukusenza ngokwaso. Ngakho-ke, udinga ukuthola i-omega-3 ngokudla okudlayo.
Izinhlanzi zamanzi abandayo, ama-walnuts, imbewu yefilakisi nethofu kubhekwa njengemithombo ehamba phambili ye-omega-3. I-Mackerel inokuqukethwe okuphezulu kakhulu kwe-omega-3, ngakho-ke ukudla njengesibonelo i-mackerel yesinkwa se-coarse kwesinkwa kungaba ngumqondo omuhle ukufeza lesi sidingo. I-Salmon, i-trout, i-herring kanye ne-sardine eminye imithombo enhle kakhulu ye-omega-3.
Izibonelo zokudla okuphezulu ku-omega-3 kulabo abane-fibromyalgia:
Okuqukethwe okuphezulu kwamaprotheni athambile
Ukukhathala, amazinga ancishisiwe kanye nokukhathala kuyizimpawu ezijwayelekile phakathi kwalabo abathintwe yi-fibromyalgia. Ngakho-ke, kubaluleke kakhulu ukukhawulela umthamo wama-carbohydrate futhi ukhulise ingxenye yamaprotheni ekudleni.
Isizathu sokuthi kungani ufuna ukudla ukudla okunokuqukethwe okuphezulu kwamaprotheni anciphile uma une-fibromyalgia yingoba kusiza umzimba ukulawula ushukela wegazi futhi ugcine ukuqina usuku lonke. Njengoba kwaziwa, ushukela wegazi ongalingani ungaholela ekukhathaleni okwengeziwe kanye nesifiso esinamandla sokudla okuqukethe ushukela.
Izibonelo zokudla okuphezulu kunamaprotheni anciphile kulabo abane-fibromyalgia:
Ushizi wasekhishini (yize wenziwe ngobisi oluncane, ngakho-ke uma uphendula imikhiqizo yobisi kufanele ucace)
Ubisi olunoshukela ophansi
Abanye batusa ukudla okulula okusekelwe kulokho esikufundile kuze kube manje
Ngokusekelwe olwazini esilufundile kuze kube manje, sineziphakamiso zokudla okulula ongazama ukungena kukho phakathi nosuku.
I-Avocado ene-berry smoothie
Njengoba kushiwo, ukwatapheya uqukethe amafutha anempilo anikeza amandla afanele kulabo abathinteka yi-fibromyalgia. Futhi aqukethe uvithamini E ongasiza ekulweni nobuhlungu bemisipha, kanye novithamini B, C no-K - kanye nensimbi ebalulekile yamaminerali kanye nemanganizi. Ngakho-ke, sincoma ukuthi uzame i-smoothie equkethe ukwatapheya ngokuhlanganiswa namajikijolo agcwele ama-antioxidants.
I-Salmon enama-walnuts ne-broccoli
Inhlanzi isidlo sakusihlwa. Sincoma kakhulu ukuthi udle izinhlanzi ezinamafutha, mhlawumbe i-salmon, okungenani amahlandla ama-3 ngesonto uma uhlushwa i-fibromyalgia. Sikholwa ukuthi empeleni kufanele uzame ukukudla kuze kube izikhathi ezi-4-5 ngeviki uma unalesi sifo esingelapheki sokuxilonga. I-Salmon iqukethe amazinga aphezulu e-omega-3 aphikisana nokuvuvukala, kanye ne-protein engancishi enikeza uhlobo olufanele lwamandla. Hlanganisa ne-broccoli egcwele ama-antioxidants nama-walnuts ngaphezulu. Kokubili kuphilile futhi kuhle kakhulu.
Ijusi kalamula nge imbewu ye-chia
Okunye ukuphakamisa okuhle ekudleni kwe-fibromyalgia. Okungukuthi, ijusi kalamula iqukethe amavithamini kanye namaminerali angenza njenge-anti-inflammatory futhi ngenxa yalokho anciphisa izinhlungu. Imbewu yeChia inamazinga aphezulu amaprotheni, i-fiber, i-omega-3s kanye namaminerali, okwenza lokhu kokugcina kungenye yezindlela ezinhle kakhulu zokudla ongazithola.
Ukudla okufanele kugwenywe uma une-fibromyalgia
Ushukela u-pro-inflammatory - okusho ukuthi ukhuthaza futhi udale ukusabela kokuvuvukala. Ngakho-ke, ukuthola ushukela ophakeme akuyona into ehlakaniphile kakhulu ongayenza uma une-fibromyalgia. Ngaphezu kwalokho, kuyenzeka ukuthi okuqukethwe ushukela omningi kuvame ukuholela ekuzuzeni isisindo, nakho okungabeka ubunzima obuningi emalungeni nasemisipha yomzimba. Nazi izibonelo zokudla neziphuzo ezinokuqukethwe okushukela okumangazayo:
Amakhekhe, amakhukhi namakhukhi
Ama-bagels kanye ne-churros
Sauce on can
Abantu abaningi abane-fibromyalgia babika izimpawu eziba nzima lapho bephuza utshwala. Kuyiqiniso futhi ukuthi imishanguzo eminingi elwa nokuvuvukala kanye ne-analgesic ayisebenzi kahle ngotshwala - nokuthi umuntu angaba nezindlela ezingezinhle noma anciphise umphumela. Utshwala futhi buqukethe izinga eliphezulu lamakhalori futhi imvamisa ushukela - okusiza ukunikeza ukuphendula okwengeziwe kokuvuvukala nokuzwela kobuhlungu emzimbeni.
Ukudla okuphezulu kuma-carbohydrate
Amakhukhi, amakhukhi, ilayisi elimhlophe nesinkwa esimhlophe kungadala amazinga kashukela egazi kuye esibhakabhakeni bese kuba nolaka. Amazinga anjalo angalingani angaholela ekukhathaleni nasekukhuleni kobuhlungu bezinhlungu kulabo abane-fibromyalgia. Ngokuhamba kwesikhathi, ukungalingani okunjalo kungaholela ekulimaleni kuma-insulin receptors kanye nobunzima bomzimba ekuphatheni ushukela wegazi futhi ngenxa yalokho amazinga wamandla.
Qaphela la mabhomu e-carbohydrate:
Ukudla okungenampilo nokudla okuthosiwe okujulile
Uma uthosa uwoyela, wakha izakhiwo zokuvuvukala - okusebenza futhi kokudla okuthosiwe. Ucwaningo lukhombisile ukuthi ukudla okunjalo (njengama-fries ama-french, ama-chicken nuggets nama-spring rolls) kungakhulisa izimpawu ze-fibromyalgia. Lokhu kusebenza nasekudleni okucutshunguliwe, njengamadonathi, izinhlobo eziningi zamabhisikidi ne-pizza.
Ezinye izeluleko zokudla kulabo abane-fibromyalgia
Ukudla kwe-vegat ye-fibromyalgia: "Go vegan"
Kunezifundo eziningi zokucwaninga (kufaka phakathi uClinton et al, 2015 noKaartinen et al, 2001) okukhombisile ukuthi ukudla ukudla okwenziwe ngemifino, okuqukethe okuqukethwe kwemvelo okuphezulu kwama-antioxidants, kungasiza ekwehliseni izinhlungu ze-fibromyalgia, kanye izimpawu ngenxa yesifo samathambo.
Ukudla kwemifino akuyona eyabo bonke abantu futhi kungaba nzima ukunamathela kukho, kepha ukuzama ukufaka okuqukethwe okuphezulu kwemifino ekudleni noma kunjalo kunconywa kakhulu. Lokhu kuzokusiza nokuthi unciphise ukudla okudla ngekhalori futhi ngaleyo ndlela uthole isisindo esingadingekile. Ngenxa yobuhlungu obuhambisana ne-fibromyalgia, ukuhamba kaningi kuba nzima kakhulu, bese kufika amakhilogremu angeziwe. Ukusebenza ngenkuthalo ukunciphisa isisindo, uma ufisa, kungaholela ezinzuzweni ezinkulu zezempilo kanye nemiphumela emihle - njengobuhlungu obuncane empilweni yansuku zonke, ukulala okuthuthukisiwe nokudangala okuncane.
Phuza amanzi amaningi amahle aseNorway
ENorway singathola amanzi amnandi emhlabeni empompini. Iseluleko esihle izazi zezempilo ezivame ukusinikeza labo abane-fibromyalgia noma i-diagnostic pain engalapheki ukuthi siphuze amanzi amaningi bese sigcina hydrate usuku lonke. Kuliqiniso ukuthi ukuntuleka kwe-hydration kungashaya labo abanama-fibro ngokwengeziwe ngenxa yokuthi amazinga wamandla ngokuvamile aphansi kunakwabanye.
Ukuphila ne-fibromyalgia kumayelana nokwenza ushintsho - njengalabo abaseduze kwakho kufanele bakunake (esikhuluma ngakho esihlokweni esixhumene naso ngezansi). Ukudla ngendlela efanele kungasebenzela abanye kahle, kepha kungahle kungaphumeleli kwabanye - sonke sihlukile, noma ngabe sinesifo esifanayo.
Funda futhi: Izeluleko ezi-7 Zokukhuthazela Nge-Fibromyalgia
Imininingwane eminingi? Joyina leli qembu!
Joyina iqembu le-Facebook «I-Rheumatism ne-Chronic Pain - INorway: Ucwaningo nezindaba»(Chofoza lapha) ukuthola izibuyekezo zakamuva ocwaningweni nasekubhaleni abezindaba mayelana nokuphazamiseka okungamahlalakhona. Lapha, amalungu angathola usizo nokusekelwa - ngazo zonke izikhathi zosuku - ngokushintshana nakho kwabo siqu nezeluleko.
IVIDIYO: Ukuzivocavoca kwamaRheumatists nalabo abathinteka yiFibromyalgia
Zizwe ukhululekile ukubhalisa esiteshini sethu - bese ulandela ikhasi lethu ku-FB ukuthola amathiphu ezempilo nsuku zonke nezinhlelo zokuzivocavoca umzimba.
Sithemba ukuthi le ndatshana ingakusiza ekulweni ne-fibromyalgia nobuhlungu obungapheli.
Zizwe ukhululekile ukuhlanganyela kwezokuxhumana nabantu
Nakulokhu, sifuna buza kahle ukuthi wabelane ngale ndatshana kwezokuxhumana noma ngebhulogi yakho (zizwe ukhululekile ukuxhumana ngqo nendatshana). Ukuqonda nokugxila okwandayo kuyisinyathelo sokuqala esibheke empilweni engcono yansuku zonke kulabo abane-fibromyalgia.
I-Fibromyalgia ukuxilongwa kobuhlungu okungapheli okungalimaza kakhulu umuntu othintekile. Ukuxilongwa kungaholela ekunciphiseni kwamandla, izinhlungu zansuku zonke nezinselelo zansuku zonke eziphakeme kakhulu kunalokho uKari no-Ola Nordmann abakhathazekile ngakho. Sikucela ngomusa ukuthi uthande futhi wabelane ngalokhu ngokugxila okwandayo nocwaningo olwengeziwe ekwelapheni i-fibromyalgia. Sibonga kakhulu kuwo wonke umuntu othanda futhi owabelana - mhlawumbe singaba ndawonye ukuthola ikhambi ngelinye ilanga?
Inketho A: Yabelana ngqo ku-FB - Kopisha ikheli lewebhusayithi bese ulinamathisela ekhasini lakho le-facebook noma eqenjini elifanele le-facebook oyilungu lalo. Noma cindezela inkinobho "YABELA" ngezansi ukuze wabelane ngokuthunyelwe ngokuqhubekayo kufacebook wakho.
(Chofoza lapha ukuze wabelane)
Ngiyabonga kakhulu kuwo wonke umuntu osiza ukukhuthaza ukuqonda okwandayo kwe-fibromyalgia nokuxilongwa kwezifo ezingamahlalakhona.
Inketho B: Xhuma ngqo i-athikili kubhulogi yakho.
Inketho C: Landela futhi ulingane Ikhasi lethu le-Facebook (chofoza lapha uma ufisa)
Holton et al, 2016. Indima yokudla ekwelapheni i-fibromyalgia. Ukuphathwa Kwezinhlungu. ivolumu 6.
IPHEPHA LOKUQALA: - 7 Amathiphu Okukhuthazela I-Fibromyalgia
Chofoza esithombeni esingenhla ukuhambisa ekhasini elilandelayo.
Landela i-Vondt.net ku I-YOUTUBE
(Landela futhi ubeke amazwana uma ufuna senze ividiyo nge-Exercise ethile noma ukucacisela izindaba zakho ngqo)
Landela i-Vondt.net ku FACEBOOK
(Sizama ukuphendula yonke imiyalezo nemibuzo kungakapheli amahora angama-24-48. Singakusiza futhi ukuhumusha izimpendulo ze-MRI nokunye okunjalo.)
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/fibromyalgidietten2-700px.jpg?media=1648573622 365 700 olimalayo https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 olimalayo2018-07-25 10:07:122019-06-20 16:17:44I-Fibromyalgia: Ikuphi Ukudla Okufanele Futhi Ukudla Kwalabo Abene-Fibromyalgia?
Ingabe ikhona incwadi ngezindlela zokupheka nokudla kwalabo abane-fibromyalgia? Ngakho-ke lowo angenza izitsha ezahlukene?
Yilokhu kanye ebengikudla iminyaka emi-2 edlule. Akunabuhlungu kude, kepha ulahlekelwe ngama-47 kilos. Abanye bethu banezinhlungu ezingapheli ezingalapheki ngeshwa ezingasizi okuningi ngokudla noma ukuzivocavoca. Ngokwami, kuvame ukuphela ngezinsuku ezimbalwa zobuhlungu obukhulu nokuhlanza uma ngivivinya kakhulu. Ngiye kuma-spas kanye nokuzivocavoca okuvunyelenwe ukuthi ukuvivinya umzimba kunethonya elehlukile kimi.
Ngifunde ngentshiseko enkulu i-athikili nge-osteoarthritis nokuthi ingadla kanjani ama-anti-inflammatory. Kuhle kakhulu lapha.
Ngemuva kwalokho thola isihloko ngokuthi umuntu one-fibro angadla kanjani ukunciphisa ukuvuvukala futhi adideke !! Kungani imikhiqizo yobisi nobisi inganconyelwanga i-osteoarthritis, kepha hhayi i-fibroids? Kuyaziwa ukuthi nge-fibro kufanele sihlukane nobisi nemikhiqizo yobisi. Kungani ulwazi oluxubile noluphikisanayo?
Nioclay v / Vondt.net uthi:
Ngiyabonga kakhulu ngokuxhumana nathi. I-athikili manje ibuyekeziwe.
Ufuna ukujoyina ingxoxo?
Zizwe ukhululekile ukufaka isandla!
Ikheli lakho le-imeyili ngeke lishicilelwe. Izinkambu eziyisibopho zimakwe ngazo *
Londoloza igama lami, i-imeyili newebhusayithi kulesi siphequluli ngokuzayo lapho ngibeka amazwana.
Ucwaningo: Lokhu kungaba imbangela 'ye-Fibro fog' Ukucwaninga: Amaprotheni Amabili Angasiza Ukuthola I-Fibromyalgia